Hordhaca kulanka xiisaha badan Barcelona vs Real Madrid El clasico ee Copa del Rey – Walaal24 Newss
Hordhaca kulanka xiisaha badan Barcelona vs Real Madrid El clasico ee Copa del Rey
February 6, 2019	0	By walaal24
Kooxda Real Madrid ayaa caawa u safreysa garoonka Camp Nou, halkaasoo ay kula soo ciyaari doonto naadiga Barcelona kulan ka tirsan Copa del Rey.
Labada kooxood ayaa isku qaban doona El Clasico gaar ahaan semi-final-ka ama afar dhammaadka Copa del Rey, iyagoo lugta labaad ee tartankan ciyaari doona saddex todobaad kaddib.
Garoonka: Camp Nou (Barcelona).
Xiliga Saacada: 11:00 PM Habeennimo oo Caawa ah.
Garsooraha: Mateu Lahoz
Lionel Messi ayaa qaba dhaawac bowdada ah oo ka soo gaaray kulankii ay barbaraha 2-2 la galeen Sabtidii naadiga Valencia inkastoo uusan dhaawacaas ahayn mid halis ah, hadda shaki ayaa laga galinayaa kulankan.
Tababaraha Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa la filayaa inuusan kabtanka Argentina halis gelin doono kulankan maadaama uusan 100% taam ahayn.
Dhinaca kale Weearyahanka kooxda Barcelona ayaysan u badnayn inuu kulankan taam u noqdo, maxaa yeelay isagu waxa uu weli ka soo kabanayaa dhaawac muruqa ah.
Kooxda ku ciyaarta garoonka Camp Nou ayaan sidoo kale heli doonin oo qaabili doonta Los Blancos iyadoo aan haysan Rafinha iyo Samuel Umtiti.
Real Madrid ayaa dhankeeda aan la daalaa-dhacayn wax dhaawacyo ah, macallin Solari ayaana haysta shax caafimaad qabta ee taam ah oo ay ku jiraan weeraryahanka qaab ciyaareedka sare ku jira ee Karim Benzema iyo xiddiga taam ahaanshaha haysta ee Gareth Bale.
Kaliya waxaa Real Madrid ka maqnaan doona kulankan daafaca aan inta badan la isticmaalin ee Jesus Vallejo.
Waxyaabaha uga baahantahay:-
.>- Barcelona iyo Real Madrid ayaa tartammada oo dhan ku kulmay 272 kulan, Barcelona ayaa hoggaaminaysa oo guulo badan waxaana ay gaartay 113 guul, Real Madrid ayaa dhankeeda adkaatay 99 kulan, halka ay barbaro galeen 60-jeer.
Real Madrid ayaa kulankan imaanaysa iyadoo ku jirta qaab-ciyaareedkii ugu fiicnaa xilli ciyaareedka, waxa ay badisay shan kulan oo xiriir ah tartammada oo dhan markii ugu horreysay sanad ku dhowaad.
Gool ay caawa ku soo dhaliso bannaanka ayaa muhiim u noqon doona, maadaama Real Madrid ay gool dhalinaysay 14-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay booqatay garoonka Camp Nou tartammada oo dhan.
Markii ugu dambeysay oo ay kooxda Barcelona ku guuldarreysatay inay gool ku dhaliso garoonkeeda kulanka El Clasico waxay ahayd sanadkii 2007, guud ahaanna kulankan goolal badan ayaa la iska dhaliyaa labada dhinac.
Ra’iisul wasaaraha XFS oo Muqdisho kulan kula qaatay Madaxweynaha Koofur Galbeed
Madaxweynaha Mareykanka oo jeediyay khudbadiisi Labaad ee sanadlaha ahayd
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida oo Xukun dil ah ku ridday xubin ka tirsan Daacish
Dib u hesiisiinta K/Galbeed oo la soo geba gebeeyey Wejigii 1-aad magaalada Beydhabo
Meydka Godomiyhii Gobolka Banaadir oo laga soo dejiyay Garoonka Aadan Cade ee Muqdisho
Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyeeyay geerida Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise (Sangub)
Al-shabaab oo weerar ku qaaday Saldhigyo AMISOM ay ku lahayeen Gobolka Shabeelaha Hoose
Urur Goboleedka IGAD oo bogaadiyay heshiiska Dowladda Soomaaliya iyo Ahlu-Sunna
Wasiir Beyle oo la kulmay qurba joogta Soomaaliyeed ee Magaalada Washington DC
Madaxweyne Farmaajo iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Magaalada Garoowe ee maamulka Puntland
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee BJFS oo gaaray dalka Koonfur Afrika
Shirkii Midowga Baarlamaannada Adduunka oo lagu soo geba gebeeyey Dalka Qatar
Daawo: Madaxweyne Lafta-gareen oo xariga ka jaray Xarunta keydka Daawada K. Galbeed ee Soomaliya
Daawo: Wasiir Goodax oo sheegay Imtixamkii Shahadiga uu ku soo dhamaaday Guul Ardeydana u rajeynayo Guul
Daawo: Ra’iisal wasaare ku xigeen Khadar oo khudbad ka jediyay London kaga hadlayay mudadii labada Sano Dowlada jirtay………….
Daawo: Magalada Boosaaso oo ka socota gurmad loo sameynayo doonidii caariday